जो इन्द्रजात्रामा रमेका छैनन्, उनीहरू काठमाडौंमा जमेका छैनन् :: Setopati
पद्मसुन्दर जोशी काठमाडौं, भदौ २७
गत वर्षको इन्द्रजात्रा। सबै तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
काठमाडौं उपत्यकाका चाडपर्वले संसारका उच्चकोटीका संस्कृतिलाई चुनौती दिन्छन्। रोम र इटालीका सडक समारोहदेखि ब्राजिलका कार्निभल र जापानका हाकाता पर्वहरू हाम्रा इन्द्रजात्रा र बिस्केट जात्रासामु फिक्का छन्। हाम्रा यी पर्वले यहाँका कलाकौशल मात्र पस्कँदैनन्, त्यसभित्रका जीवन दर्शन पनि प्रतिविम्बित गर्छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा मनाइने थुप्रै जात्रा र चाडपर्वमध्ये इन्द्रजात्राको विशिष्ट स्थान छ। तपाईं काठमाडौंबासी भइसक्नुभयो र इन्द्रजात्रामा रम्नुभएको छैन भने काठमाडौंमा अझै जम्नुभएको छैन।
'यी सबै लस्करमा आउँछन्?'
‘समग्रमा रमाइलो भो,' धन्यभावमा उसले जवाफ दिनेछ।
यी सबै अप्ठ्याराका बाबजुद नयाँ पिँढी यो सांस्कृतिक सहयात्रामा मच्चिएर अघि आइरहेछ। यो उत्साहलाई कसरी चिरस्थायी बनाउने होला? जात्राको मजा लिने हो भने र जात्रामय काठमाडौंको गर्व गर्ने हो भने सोच्ने जिम्मेवारी तपाईंको पनि हो।